Askari hore oo 62 jir ah oo jebiyay Rikoorka mid ka mid ah Jimicsiga ugu adag adduunka (Daawo Video)
Mogadishu - 01:23:38
Tuesday February 25, 2020 - 22:02:20 in Wararka by Super Admin
Askari hore oo Mareykan ah oo 62 jir ah ayaa taariikh cusub u dhigay tartanka Jimicsiga loo yaqaan (Plank) oo uu qofku dherer isku fidiyo isku celinaya oo keliya labadiisa xusul iyo faraha hore ee labadiisa lugood, taasoo ka mid ah jimicsiyada jirka ee ugu adag caalamka.
Laakiin meesha sheekadu ku socoto ayaa ah in George Hood uu uu sidaa xusullada u cuskanayay muddo 8 saacadood iyo 15 ilbiriqsi ah, taasoo loo aqoonsaday Rikoodh caalami ah oo uusan qof isaga ka horreeyay sameyn (Longest Plank Ever), waxaana la guddoonsiiyay abaalmarinta Guinness World Record.
Mr Hood ayaa horey Rikoodh ugu dhigay isla jimicsigan, hase yeeshee 2016 waxaa intii u sameeyay oo kale xoogaa yar ka sare maray Mao Weidong oo Shiinaha ka socday.
Ma uusan quusan George Hood, waxaana maalin walba ugu yaraan 7 saacadood uu sameyn jiray jimicsigan, isagoo raacin jiray 75 Push ups.
Waxaa la sheegaa in mar uu tababaranayay 2018-kii uu isla jimicsigan (Plank) ka sameeyay 10 saacadood iyo 10 daqiiqo, hase yeeshee looma aqoonsan mid caalami ah.
Haatan wuxuu sheegay Askarigan hore in uusan mar dambe sameyn doonin Jimicsigan dunida oo idil ay isku waafaqsan tahay inuu yahay mid ay dadka qaar ee dhallinyarada ah aysan 2 daqiiqo xitaa ka sameyn karin, wuxuuna xusay inuu jecel yahay in uu sii noolaado illaa 100 sanadood, isuna beddeli doono tababare.